Kadịnal kwetara na, okwu Francis bụ "Ihe na-ebute oke mmekpa ahụ" – gloria.tv
Kadịnal kwetara na, okwu Francis bụ "Ihe na-ebute oke mmekpa ahụ"
Mgbachitere Pope Francis maka Bishọp Chile bụ Juan Barros bụ “ihe butere oké mmekpa ahụ maka ndị gabigara [homo] arụruala mmekọahụ” n'olu Kadịnal Seán O’Malley mgbe ọ na-ede na bostoncatholic.org (Janury 20). O'Malley so na ndị otu Bergoglio.
Francis onye nke jụrụ i kwujọ Barros, sịrị na January 18, "Ubochi a ga-ewetere m aka ebe megidere bishọp a, a ga m ekwu okwu. E nweghị otu mkpụrụ aka ebe megidere ya. Ihe a bụ ebubo ụgha! O doro gị anya?"
Ma na site n'olu O’Malley okwu Francis na-egosiputa ebumnuche “ọ bụrụ na i nweghi aka ebe maka ihe ị na-ekpesa ọ pụtara na agaghị ekweta n'ihe ị na-ekwu”. N'uzo a, O’Malley na-akọwa usoro ikpe nke bụ na ekwesịghị ị ma mmadụ ikpe na-enweghi aka ebe.
Bishọp Barros bụ onye e boro ebubo ikpuchido arụruala mmekọahụ nke onye Fada Chile a ma ama bụ Fada Fernando Karadima, 86, nke ọ bụ otu n'ime ụmụ azụ ya. Karadima bụ onye Vatican mara ikpe wee tụọ ya ndụ ahụhụ na ekpere maka arụruala mmekọ nwoke na nwoke. O nweghị gosiri na Barros ma maka arụruala Karadima.
Foto: Seán O’Malley, © bostoncatholic.org, CC BY, #newsCcithrsywy
ig.news mentioned this post in Akụkọ ọjọọ nke AP ebusola Francis agha.
297 Apr 8, 2018
222 Apr 8, 2018
235 Apr 8, 2018
214 Apr 8, 2018
231 Apr 7, 2018
227 Apr 6, 2018
221 Apr 6, 2018
270 Apr 6, 2018
248 Apr 6, 2018
223 Apr 5, 2018
42 Apr 5, 2018
34 Apr 5, 2018
52 Apr 5, 2018
41 Apr 4, 2018
41 Apr 2, 2018